हृदयाघात भएका झापाका रेवतको पाँच महिनापछि युएईमा सद्गत – Loktantrapost Loktantrapost
हृदयाघात भएका झापाका रेवतको पाँच महिनापछि युएईमा सद्गत
४ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:३४
दुबई, ४ मङ्सिर । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युएईको उत्तरी इमिरेट्स रास अल खेमामा गत जेठ १३ गते निधन भएका मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १० धुलाबारीका रेवत थापाको शबको करिब ५ महिनापछि मङ्सिर ३ गते बुधबार सद्गत गरिएको छ ।
थापाको निधन भएको लामो समयसम्म कागजात अपुग भएको कारण रास अल खेमाको एक हस्पिटलमा उनको मृत शरीर बेवारिसे अवस्थामा रह्यो ।
युएईको सरकारी एक कर्मचारीले नेपाली दूतावासका पीआरओलाई मृतकबारे जानकारी गराएपछि मात्रै उनको मृत शरीर व्यवस्थापनबारे कामहरु अगाडि बढेको हो ।
किन बिलम्ब भयो ?
उनको निधनको कारण हृदयाघात रहेको रिपोर्ट नेपाली दूतावास अबुधाबीबाट भर्खर प्राप्त भएको छ ।
उनी रास अल खेमाको नखिल भन्ने स्थानमा नेपालीहरुसँग मिलेर कोठा भाडामा (बेड स्पेस) बस्थे । सँगै बस्ने साथीहरु बिहान उठी काममा गए पनि उनी भने कोठामै बसिरहेका थिए । दिउँसो २ बजेतिर उनी कोठामै मृत भेटिएका रहेछन् ।
नेपालीहरुसँग सँगै बसे पनि साथीहरुलाई उनले आफ्नो घर ठेगाना बारे कहिल्यै खुलाएनन् । उनको पासपोर्ट पनि लामो समय भेटिएन । त्यही भएर पनि उनको शब धेरै दिनसम्म बेवारिसे बन्यो । रेवत थापा कहिले युएई आए र कहिले उनको मृत्यु भयो भन्ने बारे युएईमा रहेका झापालीहरु लामो समय बेखबर रहे । उनी युएईमा ज्यादै सीमित मानिसहरुको सम्पर्कमा थिए ।
नेपाली दुताबास, अबुधाबीले परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा बिभागबाट निज थापाको मृत्युको बारेमा जानकारी पायो ।
मेचीनगर नगरपालिकाको १० नम्बर वडा कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा बिभागलाई पत्राचार गरे बमोजिम कन्सुलर सेवा बिभागले निज थापाको सद्गत गर्नको निम्ति सहमति पत्र नेपाली दुताबास अबुधाबीमा प्राप्त भएको थियो ।
बैदेशिक रोजगार बिभागमा रहेको विवरण अनुसार थापा गत वर्ष २०१९ को नोभेम्बर–डिसेम्बर महिनातिर युएईको रस अल खैमहमा रहेको प्रिमियर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा काम गर्न आएको देखिन्छ ।
उनले १३ नोभेम्बर २०१९ मा ०४५०३३३५० नम्बरको श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने युनियन लाईफ ईन्सुरन्स कम्पनीबाट ७६७७०२६९८१ नम्बरको बीमा पोलिसी लिएको देखिन्छ । बीमाको म्याद ५ अक्टोबर २०२२ सम्म रहेको छ ।
श्रोतका अनुसार थापा उक्त कम्पनीमा काम गर्न गएको नभई भिसा किनेर बसेका थिए । कानूनतः उनी कामदार भएर युएई आए पनि खासमा उनी उक्त कम्पनीको कामदार बन्ने उद्देश्यले युएई आएका थिएनन् । बरु कम्पनीको भिसा किनेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नको लागि आए ।
उनी कसको माध्यमबाट के काम गर्नको लागि भिसा किनेर यसरी युएई आए भन्ने बारे भने केही खुलेको छैन ।
आजकल युएईमा कम्पनीको भिसा किनेर अबैध ढंगले काम गर्ने धेरै नेपालीहरु भेटिन्छन् । यसरी भिसा किनेर बस्नु हरेक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण छ नै अर्कोतिर एउटा कम्पनीको भिसा लगाएर अर्को कम्पनीमा काम गरेको पाइएमा काम लगाउने र काम गर्ने दुबैलाई कानूनी कारबाही हुन्छ ।
मृतकको पासपोर्ट साथमा नभएको हुनाले केही ढिलाई भएको बताइएको छ ।
सद्गतमा धनगढी र पाल्पालीको सहयोग
यो कार्यमा विगत २ सातादेखि अनवरत रूपमा खटिएका थिए राजेन्द्र रास्योरा र वेदप्रसाद अर्याल ।
कैलालीको धनगढी घर भएका राजेन्द्र रास्योरा र पाल्पाका वेदप्रसाद अर्यालको झापाका रेवत थापासँग न त चिनारी थियो नत उनीहरूले जीवितै अवस्थामा रेवत थापापाई भेटेका थिए ।
अर्यालले मृतक थापाको निधनबारे थाहा पाएपछि नेपाली दूतावासबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गर्नेदेखि परिवारको खोजी गर्ने काममा झापाली समाज युएईका पदाधिकारीसँग समन्वय गरिरहेका थिए ।
यता, रास्योराले सामाजिक उत्तरदायित्वबोध गरी उक्त मृतक शरीरको सद्गत गर्ने आधिकारिक जिम्मेवारी लिएका थिए ।
नेपाली समाज युएईका महासचिव अर्याल पाल्पाली समाज युएईका पूर्व अध्यक्ष हुन् । लुलु सुपरमार्केटमा कार्यरत अर्याल कोभिड १९ को प्रकोपको बेला समस्यामा परेका नेपालीहरुको सहयोगका लागि दिनरात समर्पित भएर अहिले युएईको नेपाली समुदायमा हिरोका रूपमा सुपरिचित छन् ।
उनै अर्याललाई नेपाली दूतावासका पीआरओले रेवत थापाको अलपत्र शबबारे जानकारी गराएपछि शब व्यवस्थापनबारे प्रयास सुरु भएको हो ।
राजेन्द्र रास्योरा करिव १ दशकदेखि युएईको उत्तरी राज्य रास अल खेमामा रोजगार गरी बसेका छन् । केही समय रेस्टुरेन्टको व्यावसाय गरेका रास्योराले केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय पनि गरेका छन् । एनआरएनए युएई राक क्षेत्रीय समन्वय परिषदको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका रास्योरा एक कम्पनीमा सेल्स र मार्केटिङ बिभागमा काम गर्छन् ।
दुबई–सारजा कार्यक्षेत्र भएका अर्यालले मृतक थापाको कागजात संकलन र दूतावास सम्बन्धी काम पूरा गरेपछि राकमा मृतकका नजिकका मानिस वा आफन्त कोही सम्पर्कमा नआएपछि कैलालीका रास्योराले मानवीय कर्तव्य स्वरूप यो जिम्मेवारी लिन तयार भएका हुन् ।
स्थानीय अदालतबाट राजेन्द्र रास्योराको उपस्थितिमा सद्गत गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त भएका कारण मृतक थापाको अन्त्येष्टी बुधबार गरिएको हो ।
यो कार्यमा एनआरएनए युएई राक सल्लाहकार सन्तोष पौडेल लगायत सम्बन्धित कम्पनीले पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
खोइ त झापालीहरु ?
यो कामका लागि पर्दाभित्र रहेर योगदान गरिरहेका छन् झापाली समाज युएईका राक क्षेत्रका अध्यक्ष केशव कुमार कार्की र सल्लाहकार तथा पत्रकार मेघराज सापकोटाले ।
रातभरि काम गरेर भए पनि आफ्नो सुत्ने समय रेवत थापाको लागि खर्चिरहेका छन् कार्कीले । विभिन्न निकायमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्यालयदेखि अदालत अनि मृतक राखिएको अस्पताल पनि बेलाबेला पुग्नुपर्छ । आवश्यक रकमको अभाव भएको र शब अलपत्र परेको थाहा पाउने बितिक्कै झापाली समाज युएईले चासो दिएको हो ।
परिवारका सदस्यमा छोरी रितु थापाले बुबाको सद्गत युएईमै गर्नु भनी अनुमति दिएको पत्र पाएपछि झापाली समाज युएई नेपाल सम्पर्क समितिका सदस्य गोपी रिजाल र अबुधाबी क्षेत्रका कोषाध्यक्ष बलराम अर्याल निज थापाको घर पुगेर वस्तुस्थिति बुझेर झापाली समाज युएई केन्द्रीय समितिलाई रिपोर्टिङ गरेपछि केन्द्रीय समितिले सद्गत कार्यको लागि आवश्यक रकम निकासा गर्ने निर्णय केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार चापागाईंले गरेको जानकारी दिएका थिए ।
तर, पत्रकार मेघराज सापकोटाको पहलमा थापाको सद्गत कार्यको लागि आवश्यक रकम सम्बन्धित कम्पनी एएमटी मोबाइल कम्पनीका दिपक जो मृतकका रुममेट हुन्, ले संकलन गरेको बताइएको छ ।
सम्पर्कमा नरहँदा समस्या
बैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपालीहरुको यसरी गुमनाम मृत्यु हुने गरेको छ । बिदेश जाँदा कानूनी प्रकृया पुरा गरेर गएको भए पनि आफु जाने वा गएको देशको बारेमा थप जानकरी लिएर गएमा समस्यामा पर्दा सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
बिदेश जानु पूर्व ती देशहरुमा रहेका नेपालीहरुका सामाजिक संस्थाहरुको बारेमा जानकारी लिएर गएमा त झन् राम्रो हुनेछ । ती संस्थामा आबद्ध सयौं सदस्यहरुमध्ये कोही न कोही त चिनेका हुन्छन् नै ।
अर्कोतिर आफ्नै जिल्ला वा ठाउँको मान्छे भए पछि हुने आत्मियताले झनै नजिक बनाइदिन्छ । त्यसले गर्दा भोलिका दिनहरुमा आफुलाई पर्ने समस्याहरुबाट बच्न सकिन्छ । समस्यामा परे सहयोग पाउन सकिन्छ ।
विदेशमा जाने सबैले आफ्नो सम्पूर्ण कागजात (पासपोर्ट, भिसा, बिमा पेपर, श्रम सम्झौता पत्र, कम्पनीको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, कम्पनीको सम्पर्क नम्बर, साथीहरुको नम्बर) नेपालमा रहेका आफन्तलाई उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा राम्रो र विवेकपूर्ण काम हुनेछ ।
त्यसो गर्न नसके पनि कुनै सामाजिक, जातीय वा क्षेत्रीय संस्थामा आबद्ध भएको खण्डमा विपत्तिमा पनि सोधिखोजी गर्न सहज हुनेछ । तर, धेरैले यो रुचाउँदैनन । आफ्नो काम र रुचिको दुनियाँमा पसेपछि मानिसले परदेशमा आफन्त पनि भुलेका छन् ।
सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन र सदस्यता लिन मन नपराउनेहरुले नै विपत्तिमा दुःख पाउने गरेका छन् । निज थापाले एनआरएन, नेपाली समाज वा आफ्नो जिल्लासँग सम्बन्धित झापाली समाज युएईको सदस्यता लिएको भए अहिलेसम्म उनको शब अलपत्र पर्ने थिएन ।
उनी हाम्रो सदस्य होइन, सदस्यता लिएका छैनन् भनेर सामाजिक संस्थाहरु पछाडि परेका छैनन् । व्यक्तिभन्दा संस्था जिम्मेवार हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो । अबका दिनमा रेवत थापाको नियति कसैले भोग्नु नपरोस् ।
दिवङ्गत थापाको आत्माको चिर शान्तिको कामना । परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना ।